I-Autoimmune Pancreatitis > Isifo sikashukela
I-Autoimmune pancreatitis: inqubo yokuxilonga, ukwelashwa kanye ne-diagnostic
I-Autoimmune Pancreatitis - uhlobo lwe-pancreatitis, kuyi-pathogenesis okubandakanya kuyo izindlela ze-autoimmune. Kulolu hlobo lwe-pancreatitis, i-hypergammaglobulinemia iyabukwa, amazinga aphezulu e-IgG, i-IgG4 esegazini yegazi, ama-autoantibodies akhona, impendulo ehlukile yokwelashwa ekwelashweni nge-corticosteroids iqoshwe.
Izinhlobo ezimbili ze-autoimmune pancreatitis ziyahlukaniswa:
Uhlobo lwe-1 - i-lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis
Uhlobo 2 - i-idiopathic duct-concentric pancreatitis ene-granulocytic epithelial vidions.
Izisekelo zokuxilonga i-autoimmune pancreatitis zikhonjiswa kwi-International Consensus ekuxilongeni i-autoimmune pancreatitis, eyamukelwa eJapan ngo-2010. Isikhombisi esiyisisekelo se-serological (S1) sokuxilongwa kwe-AIP sanqunywa ukuthi sibheke ukwanda kwamazinga we-serum IgG4 wezilinganiso ezingaphezu kwezingu-2, kanti nenqubo engabazisayo (S2) iyindlela yokwanda kwesikhombisi, kepha hhayi ngaphezulu kwezinkambiso ezi-2.
Ezigulini ezine-autoimmune pancreatitis inhlanganisela ehlukahlukene kanye nemvamisa eguquguqukayo (30-95%), kuboniswa izimpawu ezilandelayo nama-syndromes:
• i-painerate syndrome
• Izifundo eziqhubekayo ezingapheli ngaphandle kokucaciswa okucacayo noma inkambo yamuva,
Izimpawu zokujaha ijojice,
• ukukhuphuka kwenani eliphelele lama-gammaglobulins, i-IgG noma i-IgG4 ku-plasma,
• ukuba khona kwama-autoantibodies,
• faka ukugqama kokukhuliswa kwamanyikwe,
• ukungalingani (okungajwayelekile) kwe-GLP,
• i-stenosis yengxenye ye-intrapancreatic ye-bile duct ejwayelekile, okuvame kakhulu - ukubandakanyeka enqubweni yezinye izingxenye zepheji le-biliary (sclerosing cholangitis), efana nezinguquko ku-PSC,
• ushintsho lwe-fibrotic ekuhambeni kwe-pancreatic parenchyma ngokufakwa kwe-lymphocyte kanye nama-plasmocytes ama-IgG4,
• ukwehlukanisa i-thrombophlebitis,
• ukuhlangana njalo nezinye izinqubo ezihlelekile: I-PSC, i-cirrhosis eyisisekelo, i-ulcerative colitis, isifo sikaCrohn, isifo se-Sjogren's syndrome, i-fibrosis ye-retoperitoneal, ukulimala kwe-interstitium kanye nezinto zangaphakathi zezinso,
• ukusebenza kwe-glucocorticoids.
Ngenxa yenombolo enkulu yezimpawu ze-autoimmune CP, ezinye zazo ezingacaciswanga ngokuqinile, ngonyaka we-2002, okokuqala, iJapan Pancreatic Society yahlongoza izindlela zokuxilonga ze-autoimmune CP ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yokuxilongwa.
• Imininingwane evela ezifundweni ezinsizakalo: ukuncishiswa kwe-GLP ngobukhulu bodonga olungagunyaziwe futhi kubuye kukhulise ukwanda kwamanyikwe.
• Imininingwane yaselabhorethri: ukunyuswa kwe-serum kwama-gammaglobulin kanye / noma i-IgG noma ukuba khona kwe-autoantibodies ku-plasma yegazi.
• Idatha yokuhlolwa komlando: ushintsho lwe-fibrotic ku-parenchyma kanye namachashaza e-pancreatic nge-lymphocytic kanye ne-plasmacytic infiltration.
Ngokwesinqumo seJapan Society of Pancreatologists, ukuxilongwa kwe-autoimmune pancreatitis kungasungulwa kuphela uma inqubo yokuqala ihlangene neyesibili kanye / noma eyesithathu.
Ngo-2006, uK. Kim et al. kuphakanyisiwe, ngenxa yesibalo esiphakeme samacala angaxilwanga alesi sifo lapho kusetshenziswa inqubo yeJapan Society of Pancreatologists, okuthuthukile futhi kulungele kakhudlwana ukuthola ukuxilongwa kodokotela i-autoimmune pancreatitis, ngokwengxenye esekelwe ezimisweni ezihlongozwe ngaphambili.
• Ikhrayitheriya 1 (main) - idatha evela ezifundweni ezingelusizo:
- faka ukunyusa kwamanyikwe ngokusho kwe-CT,
- Ukuphazamisa noma ukuhlukanisa okungajwayelekile kwe-GLP.
• Ikhrayitheriya 2 - idatha yokuhlolwa kwelebhu (okungenani olulodwa kulezi zinguquko ezimbili ezilandelayo):
- Khulisa ukuqoqwa kwe-IgG kanye / noma i-IgG4,
- ukuba khona kwe-autoantibodies.
• Ikhrayitheriya 3 - Idatha yokuhlola umlando: - i-fibrosis,
- ukungena kwe-lymphoplasmacytic.
• Ikhrayitheriya 4 - ukuzihlanganisa nezinye izifo ze-autoimmune. Ukuxilongwa kwe-autoimmune pancreatitis kungasungulwa ngenhlanganisela elandelayo yezindlela: 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3, 1 + 2, 1 + 3.
Ukuxilongwa kungenzeka uma kunenhlanganisela yenqubo 1 + 4, uma kwenzeka kuphendula impendulo enhle ekwelapheni i-glucocorticoid, kutholakala ukuthi isifo sitholakele. Ukuxilongwa kungenzeka uma ngabe kunenqubomgomo 1
Ukwelashwa nokuqunjelwa yisifo
Ezigulini ezinezimpawu ezithambile ze-autoimmune CP, ukwelashwa okufana nokwakwa-OP (indlala, i-PPI, izidakamizwa ze-antibacterial) ngokuvamile akudingekile. Uma izimpawu ze-jaundice ezivimbayo zanda, kukhishwa imfucumfucuko ye-percutaneous transhepatic or endoscopic dra dragege, ikakhulukazi esimweni sokutheleleka ngegciwane.
Ngokuxilongwa okuqinisekisiwe kwe-histological (cytologically) ye-autoimmune CP, lapho kungekho sidingo sesivivinyo se-monotherapy nge-glucocorticoids, kunconywa ukuthi kunwetshwe ukwelashwa ngokufakwa kokubhalwe ku-regimen (ngaphezu kwe-prednisone) yama-gastric secretion blockers (ikakhulukazi i-IDN) namalungiselelo e-polyenzyme anezizathu ezibambekayo (isisu sobuhlungu esingeyona neze i-syndrome )
Ngezinhloso ezibonakalayo, ngokuya izinkomba, izidakamizwa ze-antispasmodics nezidakamizwa ezingezona ze-steroidal anti-inflammatory zisetshenziswa.
Ukwelashwa kweSteroid kuvame ukusebenza ukuze kulimale izindunduma ze-bile, i-salivary gland, kanye nomonakalo we-pancreatic ducts. Kwezinye iziguli, lesi simo sithuthuka ngaphandle kokusetshenziswa kwemithi ethile. Kwezinye izimo, lapho inkambo ye-autoimmune CP ihlanganiswa nohlobo 2 lwesifo sikashukela, ukwelashwa nge-glucocorticoids kungasithuthukisa isimo sesiguli.
Kuphakanyiswa ukuthi nge-autoimmune CP, i-azathioprine ingahle isebenze. Umphumela womtholampilo utholakale ngokusetshenziswa kwe-ursodeoxycholic acid (ursofalk) amalungiselelo e-autoimmune CP, okwenzeka ngesifo sikashukela i-mellitus ne-cholestasis syndrome ngokumelene nesizinda se-stenosis sengxenye yokugcina ye-duct ye-bile ejwayelekile: inani lamamaki we-cholestasis liyancipha, usayizi we-pancreas uyancipha futhi ushukela uzinze.
Ukwelashwa kwe-Ursofalk kwe-autoimmune CP kungaba enye indlela ye-glucocorticoids. Njengoba wazi, i-ursofalk isetshenziswa ngempumelelo kwi-cirrhosis eyisisekelo ye-biliary kanye ne-PSC. Umuthi usiza ukwandisa ukuphuma kwe-bile, une-hepatoprotective and immunomodulating, ngakho-ke, ungasetshenziswa ku-autoimmune CP, ikakhulukazi ngokubandakanyeka kohlelo lwe-biliary. I-algorithm elandelayo yokwelashwa okulondoloziwe kungenzeka (Fig. 4-46).
Ngokulashwa isikhathi eside nge-prednisone, ukulawula inkambo yesifo kuyadingeka:
• Ukuhlolwa kwezimpawu ezisetshenziswayo,
• Ukuxilongwa kwezinkinga zomsebenzi we-exo- ne-endocrine pancreatic function,
• ukuqaphela izinkomba zokuhlaziywa kwegazi ngokujwayelekile nangokuphilayo,
• Ukulawulwa kwamamaki we-autoimmunity,
• lawula i-ultrasound, i-ESM ene-biopsy yamanyikwe, i-CT noma i-MRI.
Ukwelashwa kwe-autoimmune CP kuncike ekujuleni kobunzima bezinkinga, izifo ezihlangene ze-autoimmune nesifo sikashukela mellitus.
Siyini isifo se-autoimmune pancreatic
Umonakalo we-Autoimmune kuma-pancreas, noma njengoba asetshenziselwa ukuyibiza, i-autoimmune pancreatitis, ebonakala ngokwanda komsebenzi wokuzivikela ezifweni aze aqale ukusebenza ngokumelene nomzimba wakhe uqobo. Kulokhu, ukunqotshwa kuthinta ama-pancreas uqobo kanye nezindlala ze-salivary, izindunduma ze-bile, uhlelo lwamaphaphu lwezitho, izinso, isisu samathumbu, ama-lymph node nezinye izitho zomzimba.
Uhlobo lwe-autoimmune lwe-pancreatitis lubhekisela ezinhlobonhlobo ezingapheli zale ndlela yokugula ethatha isigamu sonyaka noma ngaphezulu. Ezimweni eziningi, kuba ikakhulukazi emadodeni, yize abesifazane nabo bengathinteka yilesi sifo.
Izimbangela zokuvela kwe-autoimmune pancreatitis azikasungulwa, kuyaziwa ukuthi ngesikhathi kwenzeka kokungasebenzi kahle okuthile emzimbeni, ukungasebenzi komzimba kuqala ukusebenza ngokulandelana okuphambene, futhi kuhlasela nezitho zomzimba wakhe.
Ukuthuthukiswa kwendlela ye-autoimmune yesifo se-pancreatic kuvame ukuhlotshaniswa nokwakhiwa kwesifo samathambo, isifo se-Sjogren, kanye ne-pathologies yokuvuvukala emgodleni wamathumbu.
Isigaba esithuthukayo sesifo se-autoimmune pancreatic ngesikhathi sokuhlolwa kwe-histology ihlukaniswe:
Ukuthuthukiswa kwe-sclerosing lymphoplasmacytic pancreatitis, okuzibonakalisa ezimeni eziningi kubantu asebekhulile. Kubonakaliswa ukwakheka kokuqina kokukhanya kwesikhumba nezikhumba zomzimba, kanye nomonakalo kumanyikwe. Iphatha kahle izidakamizwa ze-steroid.
Ukuthuthukiswa kwe-idiopathic pancreatitis yohlobo oluhlanganisiwe ngomonakalo we-epithelium ye-granulocytic. Kwenzeka kaningi kubantu besizukulwane esisha, kungakhathalekile ubulili.
Lezi zinhlobo ezimbili zihluka kuphela ekuhlolweni kwe-microscopic.
Ngobukhona bokuphazamiseka kwe-autoimmune ye-concomitant ye-autoimmune ekhula lapho ezinye izitho zithinteka, i-pancreatic pancreatic pathology ihlukaniswe yaba:
ukuthuthukiswa kohlobo lwesithako se-autoimmune pancreatic lesion ye-gland, lapho i-lesion ithinta kuphela i-gland,
kanye nokuthuthukiswa kwe-autoimmune pancreatitis syndrome, lapho kuthinteka khona ezinye izitho ngaphezu kwama-pancreas.
Ama-pathologies afanayo wezitho zangaphakathi zesimo se-autoimmune:
ukuvela kwezicubu ezihlwabusayo ohlelweni lwamaphaphu wezitho nesibindi,
ukwephulwa kokuphindwa kabusha kwezinso ezinso, okuholela ekukhuleni kokuntuleka kwabo,
ukuvuvukala kwe-thyroid, okubizwa ngokuthi yi-thyroiditis,
ukuvuvukala kwezindlala zesisu, okubizwa nge- sialadenitis.
Lapho kutholakala khona isilonda, isifo okukhulunywa ngaso kungenzeka sibe:
fakazela ifomu, elibonakaliswe ngumonakalo cishe kuwo wonke umkhondo wamanyikwe,
ifomu lokugxila, lapho ezimweni eziningi, kugxilwe kutholakala esifundeni senhloko yesikhumba.
Izimpawu nezimpawu zesifo
I-autoimmune pancreatitis engapheli iyathakazelisa ngoba ayizivezi ngezibonakaliso eziphinyisiwe kanye nokuwohloka okucacile enhlalakahleni yesiguli ejwayelekile, ngisho nangezikhathi zokwanda kwe-pathology. Kwezinye izimo, lesi sifo singakhula ngaphandle kwezimpawu ezibonakalayo nhlobo, futhi ukuxilongwa sivele sikhona esigabeni sokukhula kwezinkinga.
Izimpawu ezibonakalayo zalesi sifo zibonakaliswa ngokulandelayo:
Ukubonakala kokungakhululeki emgodini wesisu ngokwakhiwa kwezimpawu ezibuhlungu zesifo se-herpes zoster ngokuqina okubuthakathaka noma okulinganiselayo.
Ukwakheka kokuqwashisa isikhumba nolwelwesi lwamafinyila emgodini womlomo, ngisho ne-sclera yamehlo.
Umbala wezindlanzana uba lula amathoni ambalwa futhi umchamo ube mnyama.
Ukuthuthukiswa kokulunywa esikhunjeni
Ukuqhakaza ngesimo esibonakalayo sokucanuzelelwa kwenhliziyo, okuvame ukuholela ekuhlanzeni okukhulu.
Ngezikhathi zasekuseni, iziguli zivame ukuzwa umlomo owomile nokunambitheka komunyu.
Izinga eliphezulu lokukhathala kanye nokwehla okusheshayo kwesisindo somzimba okuhambisana nokuphulwa kwe-pathological yesimo se-psychoemotional sesiguli.
Ukuvela kokuphefumula komoya, izinhlungu emithanjeni yamachaphaza ngokumelene nesizinda sokuvuvukala kwabo. Isiguli sizwa izinhlungu lapho sikhuluma, siginya ukudla nokuphuza uketshezi.
Ukuxilongwa kwalesi sifo
Ukuxilongwa okulungile futhi okunembile kungenziwa kuphela ngesisekelo sokuhlolwa okugcwele komzimba wesiguli, ukuhlolwa kokudlula nokudlula izinqubo ezengeziwe zokuxilonga.
Ukuthola isithombe esiphelele somtholampilo sokuthuthuka kwalesi sifo, izinqubo ezilandelayo zokuxilonga ziyanconywa:
ukuzimisela kokuhlushwa kwe-IgG4 immunoglobulin ku-serum yegazi, nge-pathology, kungakhuphuka amahlandla ayi-10,
kuvunyelwe ukuhlolwa emtholampilo okujwayelekile: igazi le-biochemistry, ukuhlaziya jikelele komchamo nezindunduma,
Ukukhonjwa kwezimpawu zesimila,
ukunquma ubungako bomonakalo kanye nesimo sesitho se-parenchymal, isigaba se-compact tomography ne-ultrasound sinqunyelwe,
futhi futhi ungakwenzi ngaphandle kwe-biopsy kanye ne-histology.
Ngemuva kokuthola isithombe esiphelele somtholampilo, udokotela wenza ukuxilongwa okuyiqiniso, anqume ukwanda kwalesi sifo, futhi athuthukise uhlobo lokwelashwa oluphumelela kakhulu noluphephile.
Kuyaqapheleka ukuthi ingane encane nayo ingathola ukuthuthukiswa kwesifo esifanayo, yize lokhu kuyinto etholakala kalula. Kodwa-ke, lapho yakhiwa enganeni, ibonakaliswa ngokukhanya ngokweqile kwesikhumba, okungenakushaywa indiva ngodokotela.
Ukuxilongwa kwe-Ultrasound kungalinganisa ngokunembile imingcele yangaphandle yesitho esithintekile, kuhlolwe izici zesakhiwo kanye nezinga lokuthuthuka kwe-pathology emgodini we-pancreas, isibindi kanye nobubanzi.
Besebenzisa le ndlela yokucwaninga, izimbangela eziba nomthelela ekuphulweni kokuphuma kwe-bile, kanye nokuba khona kwe-neoplasms kanye namatshe ku-gland patity kuyambulwa.
Ukunqunywa kwe-IgG4 immunoglobulin
Lapho wenza isifundo somtholampilo ngokuhlolwa kwegazi, kunakwa ngokukhethekile ekugxambeni kwe-IgG4 immunoglobulin. Kumuntu ophile kahle, ukuhlushwa kwayo akufinyeleli ku-5% wenani eliphelele le-serum yegazi. Ngokwanda okubukhali kokuhlushwa kwayo, singakhuluma ngokuphepha ngokuthuthuka kokuphazamiseka kwengqondo emzimbeni womuntu, kuhambisane nenqubo yokufakwa kwezitho zomzimba ezikhulula le immunoglobulin.
Ngamanye amagama, kunokuthuthuka okusebenzayo kwenqubo yokuvuvukala kwizakhiwo zezicubu ngokwenziwa kwe-fibrosis nokuqhekeka.
Ezigulini ezikhuliswa yi-autoimmune pancreatitis ngaphezu kwamaphesenti angama-88, kunezinga elikhulayo le-immunoglobulin ezikhathini ezi-5 noma ngisho eziphindwe izikhathi ezi-10 kunokujwayelekile.
Cishe akunakwenzeka ukululama ngokuphelele ekwelapheni i-autoimmune pancreatitis. Yingakho izindlela eziphambili zokwelapha ziqondiswe ekususweni kwezimpawu ezinokwethenjelwa kanye nokuvinjwa kwenqubo eqhubekayo ye-pathological.
Okokuqala, izincomo zochwepheshe abanjengo-Igor Veniaminovich Mayev (Udokotela ohlonishwayo noDokotela weSayensi) kanye no-Yuri Alexandrovich Kucheryavy (PhD), banamathela ngokuqinile ekudleni kokudla ukuze kuqinisekiswe ukuvikeleka kobuhlungu futhi kwandise impumuzo yokuqunjelwa kwe-pancreatic.
Futhi, ukwelashwa kwe-immunosuppressive kunqunyelwe, okubandakanya ukuphathwa kwama-cytostatics nama-glucocorticoids. Ukunciphisa usizi olubonakala ngezikhathi zokuqhuma kwesifo, kudalwa izidakamizwa ze-spasmolytic.
Ngokuphuma okunzima kwe-bile nokukhula kokuqwashisa isikhumba nolwelwesi lwama-mucous, kusetshenziswa izidakamizwa, ezibandakanya i-ursodeoxycholic acid.
Ngokukhula kwe-stenosis emgodini we-dancts pancreatic, kunikezwa ukwelashwa kokuhlinzwa.
Kunconywa ukusebenzisa imikhiqizo yobisi, ukudla kwezitshalo, kanye nezinhlobo zokudla zenyama emhlophe njengemikhiqizo yokudla ewusizo.
Ukukhishwa kufanele kube:
konke ukudla okunamaphesenti amaningi amafutha, izinongo, inyama ebhemayo nosawoti,
izinongo ezahlukahlukene nezinongo
iklabishi emhlophe, isithombo, isithombo, ugalikhi kanye no-anyanisi.
Kufanele futhi uyeke ukubhema.
Izinkinga kanye nemiphumela engaba khona
Ukwelashwa okungajwayelekile kwalesi sifo kugcwele lezi zinkinga ezilandelayo:
ukuthuthukiswa kwe-hypovitaminosis kanye nokuntuleka kwamaprotheni,
ukwehla ngokweqile kwesisindo, okuholela ekukhathaleni okukhulu komzimba,
ukwephulwa komzimba nosawoti wamanzi,
ukuqhubeka kwe-subhepatic jaundice,
ukutheleleka komzimba, ngendlela ye-sepsis, i-peritonitis, i-purulent cholangitis, ukungena kokuvuvukala,
ukulimala okulimaza nokuguguleka kwendlela yokugaya ukudla,
ukuphazamiseka kwe-duodenum 12,
ukuthuthukiswa kwe-pancreatogenic ascites,
ingozi enkulu yomdlavuza.
Imiphumela yokwelashwa okungazelelwe kwefomu le-autoimmune lesion ebucayi kangaka be-pancreatic ingaba miningi. Kepha, kufanelekile ukuqaphela ukuthi, ngokubuyekezwa okuningi, ukwelashwa okwanele futhi okufika ngesikhathi kuzoba nomthelela ezingeni elithile lokutholwa kwesitho se-parenchymal, kanye nokwenza ngcono inhlala-kahle yesiguli.
I-Bezrukov V.G. Ukusabela kwe-Autoimmune ku-pancreatitis engapheli. I-pancreatitis engapheli: i-etiology, i-pathogenesis, izici zomtholampilo, ukuxilongwa kwe-immunological, ukwelashwa. I-Omsk, 1995 kk. 34–35.
I-Yarema, I.V. Autoimmune pancreatitis yoMnyango Wezempilo waseRussia Federation, imfundo eqhubekayo yezokwelapha nezemithi. UM. GOU VUNMTS UMnyango Wezempilo waseRussia Federation, 2003
Bozhenkov, Yu. G. Pancreatology Esebenzayo. Igayidi yodokotela M. Uju. incwadi N. Novgorod Publishing house of Novosibirsk State Medical Academy, 2003
I-Bueverov A.O. Ukulamula kokulimala kanye nomonakalo kumanyikwe. Ijenali yaseRussia yeGastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 1999, No. 4, iphe. 15-18.
IVelbri S.K. Ukuxilongwa kwe-immunological kwezifo ze-pancreatic. M: Imithi, 1985
Midlenko V.I. Ukubaluleka kwemitholampilo ne-pathogenetic kwezinguquko ze-immunological ezigulini ezine-pancreatitis eyingozi. Abstract of dissertation. Barnaul, 1984
Isigaba esibuhlungu salesi sifo cishe asikho. Kwesinye isikhathi izimpawu aziveli nhlobo. Ezimweni ezinjalo, ukuxilongwa kwenziwa ngokwezinkinga ezibonakala. Izimpawu eziphambili zalesi sifo:
Ubuhlungu nokungaphatheki kahle esiswini esingaphezulu, kwesinye isikhathi emhlane ongezansi. Lokhu kungahlala imizuzu eminingana, futhi kwesinye isikhathi amahora. Ubuhlungu ezimweni ezinjalo bumnene noma bunesilinganiso. Lokhu kuvame ukwenzeka lapho kudliwa ukudla okunamafutha, okunezipayisi noma okuthosiwe.
Ukuphuzi kwesikhumba sesiguli (i-jaundice), umgogodla womlomo, amathe, njll. Kuvela lapho i-bile ingena ngaphakathi kwe-duodenum noma lapho imisele yesibeletho kanye ne-bile ephumayo ibuncane.
Amanyunyu alolu hlobo lwe-pancreatitis alula kakhulu kunokujwayelekile, kanti umchamo umnyama kakhulu.
Ezigulini eziningi, ukulunywa kuqala.
Isifiso sokudla siyancishiswa.
Isisu sivuvukala, isiguli siyagula, ukugabha kungenzeka.
Ekuseni, isiguli sinomlomo owomile nobumunyu, futhi kusukela emgodini womlomo sishaya kakhulu, ngokungathandeki.
Isifo sikashukela singenzeka futhi sikhule.
Ukwehla kwesisindo ngokukhathala okusheshayo.
Ubuthakathaka obujwayelekile, ukulala isikhathi sasemini, ukusebenza okunciphile.
Ukudana, imizwa emibi, ukukhuphuka kokukhathazeka.
Ukuphefumula okuncane ngenxa yomonakalo wamaphaphu.
Amaprotheni kumchamo akhombisa ukungasebenzi kahle kwezinso.
Ukuxinana okuhlukahlukene kukhula esibindini ngaphandle kokuqhuma kwesimila.
Ukuvuvukala kwezindlala zamathe, izinhlungu kule ndawo. Kungenzeka kube nobunzima ukugwinya, ukuphefumula nokukhuluma.
Funda ngezinguquko zokuphamba kumanyikwe lapha.
Izinhlobo ezihlukile ze-autoimmune pancreatitis
Kunezinhlobo ezimbili zesifo ngokuya ngezinguquko ezithweni ezitholwa ngaphansi kwesibonakhulu:
i-sclerosing lymphoplasmacytic pancreatitis,
uhlobo lwe-duct-concentric idiopathic.
Umehluko phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili wembulwa kuphela ngesikhathi sokufunda komlando. Uma isiguli sinezinye izinhlobo zesifo se-autoimmune, khona-ke i-pancreatitis ihlukaniswe:
Lapho kutholakala khona lesi sifo, izinhlobo zokuhlukanisa kanye nezokugxila ziyahlukaniswa.
Ukuxilongwa kwalesi sifo ngezindlela ezahlukahlukene
Odokotela bahlola isiguli ngamehlo futhi baqophe isikhathi (cishe) ukubonakala kwesimpawu esithile sesi sifo. Amathuba okuba isiguli sinezifo ezingamahlalakhona, ifa lakhe, imikhuba emibi, njll, kuyafundwa.
Ngemuva kwalokho kuhlolwa ngokomzimba kwenziwa: ukuzimisela kwesisindo somzimba, ukubheka ukuthi kukhona yini ukuhlasela, ukuhlolwa ngesandla kwesisu, ukushaya kwayo. Osayizi wesibindi, amanyikwe, amabala kukalwa.
Ngemuva kwalokho izifundo zelebhu zizoqala. Ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile nokwe-biochemical kuthathwa, izinga le-glucose emzimbeni wesiguli linqunywa, i-hemoglobin ye-glycated iyahlolwa, kuthathwa iphrofayili ye-lipid (ukuba khona kwamafutha egazini).
Isiguli sihlolwa kusetshenziswa amamaki we-tumor, kuthathwa ukuhlolwa komchamo, futhi inani le-immunoglobulin linqunywa. Ukuhlaziywa kwenziwa ngezindimbane zomuntu ogulayo.
Ukuhlolwa kwe-Ultrasound kwesisu kungadingeka ukuthi uhlole isiguli. Isiguli singathunyelwa ukucacisa ukutholakala kwe-spiral computed tomography noma i-analogue yayo ye-magnetic resonance. Ungadinga okubizwa ngokuthi yi-retrograde cholangiography - ukuhlolwa kwesiguli usebenzisa imishini ye-x-ray kanye nodaba olukhethekile lokufaka umbala. Lokhu kwenzelwa ukubheka ukusebenza kweziteshi zokususa i-bile emzimbeni wesiguli.
I-biopsy yama-pancreas, isibindi, i-spleen, njll.
Uma kunesidingo, khona-ke odokotela abakhona babonisana nodokotela ohlinzeka ngemithi nodokotela wobugqila.
Ngemuva kokuqoqa yonke imininingwane, kutholakala ukuxilongwa okuyikho futhi izindlela zokuqeda lesi sifo zichaziwe.
I-Autoimmune Pancreatitis Ukwelashwa
Kwezinye izimo, lesi sifo sihamba sodwa ngaphandle kokusebenzisa noma yimuphi umuthi. Kepha amacala anjalo aqabile. Ezigulini eziningi ezigabeni zokuqala zesifo, ukwelashwa kuqukethe ukuqokwa kokudla No. 5. Kubandakanya isiguli ukudla ukudla izikhathi eziyisithupha ngosuku. Okuthosiwe, okubabayo, okunamafutha, okubhemayo, okunothile kokudla okunamafayibha kufanele kungafakwa ekudleni. Ukusetshenziswa kwe-sodium chloride (i-sodium chloride) kukhawulelwe ku-3 g ngamahora angama-24. Ukudla kufanele kube zonke izinhlobo zamavithamini, usawoti we-calcium kanye nama-phosphates. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa inyama ebilisiwe, imikhiqizo yobisi enokuqukethwe okuphansi kwamafutha, inhlanzi, umhluzi wemifino kanye nesobho ngokususelwa kubo, njll. Lezi zinyathelo kufanele zinciphise ama-pancreas agulayo.
Uma umuntu ogulayo enesifo sikashukela, khona-ke kuyadingeka ukunciphisa kakhulu ukusetshenziswa koshukela, esikhundleni sakhe ngezinto ezinoshukela - ama-sweeteners. Umuntu onabo ezimweni ezinjalo kufanele abe noswidi noma ushukela oyisigaxa ukuze abuyisele, uma kunesidingo, umkhawulo we-glucose kwiplasma yegazi.
Ukwelashwa kokugada kubandakanya ukusebenzisa ama-glucocorticoids, ama-immunosuppressants, ama-antispasmodics. Ukuze uthuthukise imisele yokugaya, kungadingeka ukuthi kwethulwe ama-enzymes we-pancreatic esigulini, futhi kuzinze ukusebenza kwemisele yama-bile, kusetshenziswa ursodeoxycholic acid.
Kunconywe ukuthi iziguli ezine-autoimmune pancreatitis zinqume i-proton pump inhibitors kanye ne-insulin, bobabili abasebenza isikhathi eside nabambalwa.
Ukungenelela kokuhlinzwa kusetshenziselwa ukuqeda ukufinyezwa kweziteshi okuphuma kuzo i-bile.
Ukuze wenze lokhu, ukufakwa kwamazinyo emiseleni kwenziwa: kufakwa isakhiwo esikhethekile se-mesh ngaphakathi kwabo, esandisa ububanzi besiteshi. Iningi leziguli liyakubekezelela ukuhlinzwa kahle.
I-Autoimmune Pancreatitis Izinkinga
Ngokufinyelela okungafanele kudokotela, kungavela izimpawu ezilandelayo:
ukumuncwa kwezakhi zomzimba ezahlukahlukene ezakhiweni zamathumbu kuyaphazamiseka,
kunokushoda okuthiwa ngamaprotheni,
umzimba awunazo amavithamini
isisindo somzimba sesiguli sincipha, okuholela ekukhuleni kobuthakathaka,
isiguli sinokoma njalo,
ukuphuma komzimba wesiguli kungaqala,
ukuvuvukala kanye namaqhubu avela
i-jaundice inyuka kakhulu,
kunengozi yokutheleleka kokungena kokuvuvukala kwe-pancreas uqobo,
kuvame ukuvuvukala emiseleni ye-bile - i-purulent cholangitis,
ubuthi begazi (sepsis) noma i-peritonitis (inqubo yokuvuvukala ku-peritoneum) kungenzeka,
ukuguguleka kungavela ezingxenyeni ezihlukene zesisu,
Izilonda kanye nezinye iziphikisi kuvela emgungwini wesisu,
ingcindezi ye-portal vein iyanda
kunokuphazamiseka e-duodenum, okunesimo esingamahlalakhona,
igazi alingeni kahle emgodini wesisu, lapho uketshezi luqala ukunqwabelana,
umdlavuza wepancreatic kungenzeka.
Imiphumela yesifo nokuqunjelwa yisifo
Uma isiguli sivakashela odokotela masinyane, khona-ke ngokuvamile ngokuxilongwa okuqondile nokwelashwa okufanele, lapho lesi sifo sisesigabeni sokuqala, kungenzeka ukuthi sibuyisele ngokuphelele ukwakheka nemisebenzi yamanyikwe.
Uma isiguli siqala ukwelashwa ezigabeni zakamuva zesifo nokwelashwa kwesikhathi eside kuyadingeka ngenxa yezinguquko ezingenakuguqulwa ezithweni ezahlukahlukene, khona-ke ukubuyiselwa okuphelele kwesakhiwo nomsebenzi wesitho akwenzeki. Kepha ngisho ezimeni ezinjalo, odokotela bayakwazi ukumisa ukuthuthukiswa kwalesi sifo.
Ukuqagela kokuqala kwalesi sifo kuncike ngokuphelele ezinkingeni ezenzeka nge-autoimmune pancreatitis kanye nokugula okuhambisana nakho kweziguli (ngokwesibonelo, isifo sikashukela).
Izindlela zokuvimbela lolu hlobo lwe-pancreatitis empeleni azikho, ngoba imbangela yokugula ayikaziwa.
Izimpawu ze-Autoimmune Pancreatitis
Izici eziphambili ze-autoimmune pancreatitis ukuqina okulinganiselayo kwazo zonke izinkomba kanye nokungabikhona kokuhlaselwa kakhulu (iziqephu zokuwohloka okubukhali kwesimo sesiguli). Kwezinye izimo, kungenzeka zingabi nazimpawu, futhi ukuxilongwa kusungulwa kuphela ngokuthuthukiswa kwezinkinga.
I-abdominal pain syndrome (izimpawu eziphikelelayo): ubuhlungu noma ukungakhululeki esiswini sangaphezulu, okuvame kakhulu esifundeni se-lumbar, kwenzeka cishe isigamu seziguli, futhi kungahlala imizuzu noma amahora ambalwa. Ukuqina kobuhlungu kunesilinganiso noma kuncane. Njengomthetho, izinhlungu zivuswa ngumunxa wokudla okunezipayisi, okunamafutha nokuthosiwe.
IJaundice - kuphuzi kwesikhumba, ulwelwesi lwama-mucous (ngokwesibonelo, umgogodla womlomo) kanye noketshezi lwezinto eziphilayo (ngokwesibonelo, amathe, u-lacrimal fluid, njll.). Ikhula njengomphumela wokuphulwa kokugeleza kwe-bile ku-duodenum (ingxenye yokuqala yamathumbu amancane) ngokuncipha kwezimbotshana ze-pancreatic ducts ne-bile
indle ilula kakhulu kunokujwayelekile
umchamo umnyama kakhulu kunokujwayelekile
ukumiswa okuphuzi kwamathe, uketshezi lwe-lacrimal, i-plasma (ingxenye engamanzi) yegazi, njll.
Ukubonakaliswa kwe-dyspeptic (ukuphazamiseka kokugaya ukudla):
umunyu nomlomo owomile ekuseni,
Ukwephulwa komsebenzi we-pocrreas (ukwabiwa kwama-enzyme okubandakanya ukugaya ukudla) ezimweni eziningi akunazibonakaliso, kutholwa ucwaningo lwelabhoratri olukhethekile.
Isifo sikashukela i-mellitus (ukwephulwa kwe-metabolism yama-carbohydrate - ushukela) sikhula ngokushesha ngenxa yokuwohloka komsebenzi we-endocrine wamanyikwe (ukukhiqizwa kwama-hormone alawula umqubuko we-carbohydrate). Isici sikashukela ku-autoimmune pancreatitis yinkambo yaso enhle ngokuthuthuka okungenzeka kabusha (kokululama) ngokumelene nesizinda sokwelashwa okufanele.
ukozela phakathi nosuku
Ukwehlulwa kwezinye izitho zomzimba.
Amalunga. Iziveza njengokufushane komoya (ukuphefumula ngokushesha), umuzwa wokuntuleka komoya ngenxa yokwakheka kwezindawo zokuhlangana kwezicubu zamaphaphu.
Izinso. Kuboniswa ukwehluleka kwe-renal (ukwephulwa kwayo yonke imisebenzi yezinso) kanye nokuvela kwamaprotheni kumchamo (lokhu akufanele kube yinto evamile).
Isibindi (i-pseudotumor yesibindi) - ukuthuthukiswa kokuhlanganiswa kwezicubu zesibindi ngaphandle kwamaseli we-tumor. Itholwa yi-palpation (palpation) noma ngezindlela ezinamandla zokwenza ucwaningo. Kungenzeka ihambisane nobunzima obude kwi-hypochondrium efanelekile, engahlotshaniswa nokudla.
Izindlala ze-Salivary (sclerosing sialadenitis) - ukuvuvukala kwezindlala zamathumbu ngokufakwa kwezicubu ezijwayelekile ngezicubu ezibabayo. Ukuboniswa:
Ubuhlungu emithanjeni ye-salivary,
ubunzima bokugwinya, ukuphefumula nokukhuluma ngenxa yomlomo owomile.
Ngokwesithombe somlando(ushintsho ekwakhekeni kwama-pancreas okwembulwa ngaphansi kwesibonakhulu) izinhlobo ezimbili ze-autoimmune pancreatitis ziyahlukaniswa:
Uhlobo olu-1—i-lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis,
Umehluko phakathi kwalezi zinketho uwumlando kuphela (okungukuthi, wembulwa ukuhlolwa komlando - izingcezu zesitho ngaphansi kwesibonakhulu).
Kuya ngokubakhona kwezinye izifo ze-autoimmune (ukukhula lapho izitho ezahlukahlukene zonakaliswa amandla okuzivikela komzimba wawo - uhlelo lokuvikela umzimba) kunezinhlobo ezimbili ze-autoimmune pancreatitis:
i-autoimmune pancreatitis ekhethekile - kukhula esigulini esingenazo ezinye izifo ze-autoimmune,
i-autoimmune pancreatitis syndrome - Ikhula esigulini esinezinye izifo ze-autoimmune.
Kuya ngokwasendaweni (indawo) yesilonda hlukanisa:
fanisa ukwakheka (ukulimala kuwo wonke ama-pancreas)
ifomu lokugxila (ukulimala kwezingxenye ezithile zepancreas, imvamisa ikhanda layo, lapho lisiza, lifana nomdlavuza (isimila esibuhlungu) se-pancreas).
Udokotela wezitho zangasese uzosiza ekwelapheni lesi sifo
Ezimweni ezingavamile, ukuzelapha kuzenzakalelayo (okungukuthi, ngaphandle kokusebenzisa umuthi).
Okuyisisekelo ukwelashwa kwe-autoimmune pancreatitis.
Ukudla okungu-5 - ukudla izikhathi ezingama-5-6 ngosuku, ngaphandle kokufaka izinongo, okunamafutha, okuthosiwe, okubhemayo, nokubomvu (okunothile ku-fiber - okunzima ukugaya ingxenye yezitshalo) ukudla kusuka ekudleni, kunciphisa i-sodium chloride kuya kumagremu ayi-3 ngosuku. Ukudla kufanele kube namavithamini owanele, i-calcium ne-phosphorus usawoti (ngokwesibonelo, inhlanzi, inyama ebilisiwe, isobho kumhluzi wemifino, imikhiqizo yobisi yokuqukethwe kwamafutha alinganiselayo, njll.). Inhloso yalokhu kudla ukunciphisa umthwalo kumanyikwe.
Ngokuthuthukiswa kwesifo sikashukela i-mellitus (ukwephulwa komzimba wama-carbohydrate - ushukela) njengokubonakaliswa kwe-autoimmune pancreatitis, ukusetshenziswa koshukela kufanele kube nomkhawulo kakhulu, ungakufaka esikhundleni se-sweeteners.
Ngokuthuthukiswa kwesifo sikashukela, kunengozi enkulu ye-hypoglycemia (ukwehla okubukhali kwamazinga egazi we-glucose (carbohydrate elula), ehambisana nokungazi kahle). Ngakho-ke, isiguli kufanele sibe nokudla okumnandi (ushukela oyisigaxa noma amaswidi) naye ukubuyisela amazinga kashukela egazini.
Ukwelashwa kwe-Conservative (non-upasuaji).
I-Glucocorticoids (ama-analogue okwenziwa kwama-hormone e-adrenal cortex) - ukusetshenziswa kwale mishanguzo kuyisisekelo sokwelashwa. Iningi leziguli lidinga ama-glucocorticoids kungakapheli amasonto ambalwa. Ezinye iziguli zingadinga ukusetshenziswa isikhathi eside kwemithamo emincane yale mishanguzo.
Ama-Immunosuppressants - iqembu lezidakamizwa ezicindezela ukusebenza ngokweqile kwamasosha omzimba (izivikeli mzimba), elimaza izitho zalo. Ama-Immunosuppressants asetshenziswa uma ama-glucocorticoids engasebenzi noma engenakusetshenziswa (ngokwesibonelo, ngokuthuthukiswa kwezinkinga).
Ama-antispasmodics (izidakamizwa eziqabula imisipha ebushelelezi yezitho zangaphakathi nemithambo yegazi) asetshenziselwa ukwelapha izinhlungu ezenzeka lapho izindunduma zepancreas zincishisiwe.
Ama-enzymes e-pancreatic asetshenziselwa ukwenza ngcono ukugaya ukudla.
Ama-Ursodeoxycholic acid amalungiselelo asetshenziswa ukwenza ngcono ukuphuma kwe-bile nokubuyisela amaseli wesibindi.
Ama-Proton pump inhibitors (izidakamizwa ezinciphisa ukukhiqizwa kwe-hydrochloric acid ngesisu) asetshenziselwa ukubuyisela ingaphezulu lesisu phambi komonakalo.
I-insulin elula (emfushane) (isixazululo se-insulin ye-hormone ngaphandle kwezithasiselo ezikhethekile ezandisa isikhathi sesenzo sayo) imvamisa isetshenziselwa ukujikisa ushukela wegazi ekwakhiweni kwesifo sikashukela i-mellitus.
Ama-insulin asebenza isikhathi eside (izisombululo ze-insulin zama-hormone ezinezithako ezikhethekile ezenza ijubane ukumuncwa kwawo) zingasetshenziswa ukuguqula amazinga kashukela egazini ekwakhiweni kwesifo sikashukela esibuhlungu.
Ukwelashwa kokuhlinzwa. Ukuwohloka kokuhlinzwa (ukubuyiselwa kembala ejwayelekile) we-pancreatic ducts kanye ne-bile ducts kusetshenziselwa ukubekelwa phansi kweziqubu, okungelashwa nge-glucocorticoids. Ukuqiniswa kwamacele kuyathandeka (ukwethula ekunciphiseni kwe-duct ye-stent - ifreyimu enezikhala ezinwebisa i-lumen), ngoba lo msebenzi uvame ukubekezelelwa kalula yiziguli.
Izinkinga ze-autoimmune pancreatitis.
Ukufakwa okungafanele kwezakhi zomzimba emathunjini.
Ukushoda kwamaprotheni (umbandela okhula ngenxa yokuncipha noma ukuqeda kokudla amaprotheni).
I-Hypovitaminosis (ukuntuleka kwamavithamini emzimbeni), ikakhulukazi amafutha ancibilikayo (A, D, E, K).
Ukwehla kwesisindo kufinyelela ku-cachexia (isimo sokukhathala okujulile nobuthakathaka bomzimba).
Ukwephulwa kwebhalansi yama-electrolyte emzimbeni.
Ukwehla komzimba (isikhumba esomile nolwelwesi lwama-mucous).
Izindunduma (i-paroxysmal ye-contraction yemisipha yokuzikhethela).
I-Subhepatic jaundice - kuphuzi kwesikhumba, ulwelwesi olubonakalayo lwama-mucous kanye noketshezi lwezinto eziphilayo (ngokwesibonelo, amathe, uketshezi lwe-lacrimal, njll.) Ngenxa yokwephulwa kokuphuma kwe-bile.
ukungena ngaphakathi kokuvuvukala (ukukhuphuka kwevolumu nobuningi bezinye izingxenye zesitho ngenxa yokuqongelela kwamaseli angajwayelekile kuzo - ngokwesibonelo, ama-microorganisms, amaseli wegazi, njll.) wamanyikwe,
i-purulent cholangitis (ukuvuvukala kwama-bile ducts),
i-sepsis (ubuthi begazi - isifo esidalwa ukubakhona kwegazi lamagciwane kanye nobuthi babo (imikhiqizo emdaka),
i-peritonitis - ukuvuvukala kwe-peritoneum (ulwelwesi oluleza ingaphakathi lesisu sesisu nokumboza izitho ezitholakala kuwo).
I-Erosion (ukulimala okungaphezulu) nezilonda (iziphikisi ezijulile) zezingxenye ezahlukahlukene zomgudu wokugaya ukudla (esophagus, isisu, amathumbu).
I-subhepatic portal hypertension (ukukhuphuka kwengcindezi ohlelweni lwe-portal vein system (isitsha esiletha igazi esibindini siphuma ezithweni zesisu) ngenxa yokuvinjwa ukuphuma kwegazi kusuka esibindini).
Ukuvinjwa okungapheli kwe-duodenum ngenxa yokuvuvukala kwayo nokucindezelwa kwamanyikwe akhulisiwe.
I-abdominal ischemic syndrome (ukungena kwegazi okulimazayo ukuya ezithweni zesisu) ngenxa yokuxinana kwemithambo yegazi.
I-pancreatogenic ascites (ukunqwabelana koketshezi lwamahhala emgodini wesisu).
Umdlavuza (isimila esilimazayo - isimila esikhula ngomonakalo kwezicubu ezizungezile) zamanyikwe.
Imiphumela ye-autoimmune pancreatitis.
Ngokulashwa okufika ngesikhathi, okugcwele ngokugcwele isikhathi esifushane sesifo, ukubuyiselwa okuphelele kwesakhiwo nomsebenzi wamanyikwe kungenzeka.
Ngokuqhubeka kwesifo isikhathi eside, ushintsho lwe-cicatricial ku-pancreas luholela ezinguweni ezingenakuphikwa esakhiweni salo nasekusebenzeni kwalo, kepha kepha kulezi ziguli, ukwelashwa okugcwele kuvumela ukumisa ukuqhubeka (ukuthuthukiswa okuqhubekayo) kwenqubo.
Isimo sezulunge-autoimmune pancreatitis incike ekucindezelekeni okukhulu kwezinkinga ezihambisana nezifo ze-autoimmune (ukulimala kwezitho zakho ngomzimba - ukuzivikela komzimba) kanye nesifo sikashukela i-mellitus (carbohydrate-ushukela metabolism).
Yize i-autoimmune pancreatitis ibhekwa njengesifo esingajwayelekile, isabelo sayo ekwakhiweni kokulimazeka kwepancreatic ifinyelela ku-4-6%. Ukudlanga kwesifo akudluli ku-0,0008%. I-pathology yaqala yachazwa udokotela waseFrance udokotela uG. Sarles ngo-1961. Lesi sifo saqashelwa njengeyunithi elihlukile le-nosological ngonyaka ka-2001 ngemuva kokuqalwa kokuhlukaniswa kwe-etiological of TIGAR-O pancreatitis. Ukulimala kwe-Autoimmune ku-pancreatic gland emadodeni kutholakala izikhathi ezi-2-5 kaningi kunabesifazane. Kufika kuma-85% eziguli ezigula ngemuva kweminyaka engama-50. Lesi sifo kwesinye isikhathi sihlanganiswa ne-rheumatoid arthritis, i-retroperitoneal fibrosis, i-sclerosing cholangitis nezinye izinqubo ze-autoimmune.
I-etiology ye-autoimmune pancreatitis ayikasungulwa. Ngokuvamile, lesi sifo sitholakala ngokungafakwa lapho kutholwa uhlobo lwe-G4 immunoglobulins kanye nokungabikho kwezinye izimbangela zomonakalo we-pancreatic. Ochwepheshe emkhakheni we-gastroenterology yemitholampilo bavuma indima ehamba phambili yomthwalo wemfanelo, phakathi nezifundo zezakhi zofuzo zezokwelapha izinhlangano zenqubo ye-autoimmune ne-serotypes HLA DRβ1-0405, DQβ1-0401, DQβ1-57 yasungulwa. Kusukela egazini leziguli ezinamaprotheni angama-Whey enesisindo esingu-13.1 kDa, okubhekwa njenge-antigen ethile.
Ama-autoantigen anokwenzeka yi-carbonic anhydrase ekhona ezicutshini zezitho zokugaya, isihlahla se-bronchial kanye ne-distal renal tubules, i-lactoferrin, etholakala emgodini we-pancreatic acini, bronchial kanye gastric glands, izingxenye ze-cell nuclei kanye nemisipha ebushelelezi yemisipha, i-pancreatic trypsinogen inhibitor. Ukuzwela kwesiphambano ngama-ejenti athathelanayo akunqatshiwe - ukulingiswa kwamangqamuzana phakathi kwamasosha omzimba kuya kumaprotheni e-helicobacteriosis pathogen namaprotheni e-plasminogen-binding.
Umshini obangela izinguquko ku-pancreatic gland nezinye izitho ezibucayi ukuxhumana kwe-serum Ig G4 ngama-autoantigens amaseli we-acinar, amaseli evamile we-epithelial amaseli we-pancreatic, i-bile, amaseli amathenda, njll. Ukulimala kwe-antigenic kuhambisana nokuphelelwa amandla kwezakhi zamaselula omzimba. Isixhumanisi esiyisihluthulelo se-pathogenesis ye-autoimmune pancreatitis ukugcwala kokuphikelela okusebenzayo kwe-T ne-B lymphocyte, i-neutrophils ne-eosinophils ezicutshini ezithintekayo, ezikhuthaza izinqubo ze-fibrossteotic.
Ukuhlolwa kwe-cytological ku-pancreatic stroma kwembula izimpawu ze-fibrosis ne-sclerosis lapho kungekho khona ama-pseudocysts ne-calculi. Ngenxa yokufakelwa kwe-lymphoplasmacytic, neutrophilic, ne-eosinophilic, izindonga ze-duct ziqinisiwe, zixinaniswe futhi zihlukaniswe phakathi nenkambo ende yenqubo ye-autoimmune. Ukusakazeka kokungena okuvuvukala kuyiwa kuma-lobules of pancreas kuholela ekulahlekelweni kwesakhiwo se-lobular sesitho futhi kuvame ukuhlanganiswa ne-phlebitis. Njengokunye okuhlukahlukene kwe-pancreatitis engapheli, ukubalwa kwe-parenchyma ne-stroma kungenzeka.
Lapho izinhlobo zokuhleleka kwe-autoimmune pancreatitis, ukwanda kwenqubo ye-fibro-sclerotic, ukuba khona kwezilonda ezihambisanayo zezinye izitho, nezimpawu zokuziphatha zokuvuvukala ziyabhekwa. Ngokuhlukahluka okugxile kwesifo, izingxenye ngazinye ze-pancreatic parenchyma, ikakhulukazi inhloko yesitho, zonakalisiwe. Imvamisa, okungenani i-1/3 ye-gland iyathinteka (uhlobo lwe-pancreatitis). Ngendlela yokuphambanisa ye-pathology, ukubandakanyeka kwesitho sonke kuyinto enobuntu.
Uma kungekho ezinye izifo ze-autoimmune, i-pancreatitis ibizwa ngokuthi yodwa. Endabeni yezilonda ezihlelekile zezitho eziningana, zikhuluma ngokuvuvukala kwe-syndromic autoimmune pancreatic. Njengoba kunikezwe isithombe somlando, izinhlobo ezimbili eziphambili zalesi sifo ziyahlukaniswa, ngasinye sazo sihlukile ezicini zaso zesimo somtholampilo:
Uhlobo lwe-Lymphoplasmacytic-sclerosing of pancreatitis. Ukungeniswa ngamaseli akhiqiza i-immunoglobulin, kumakwe i-strrosal fibrosis yesitho nokuqothula i-phlebitis predominate. Kuhlanganiswe ne-IgG4-ehambelana ne-autoimmune pathology. Inkambo ebuyela emuva ngokuqhubeka kwezinguquko ze-sclerotic iyimpawu.
I-ductal-concentric idiopathic pancreatitis. I-Morphologically ibonakala njengokungeniswa kwe-neutrophilic enamaqoqo amaseli afana nama-microabscesses. I-Phlebitis ne-fibrosis aziphinyiswa kangako. Amazinga weSerum IgG4 ajwayelekile. Ezimweni ezingama-30%, kuhlotshaniswa ne-ulcerative colitis. Iyaqhubeka ngaphandle kokubuyela emuva. Kwenzeka izikhathi ezi-3.5-4 kaningi.
Isimo somtholampilo walesi sifo sehlukile ekulimazeni okujwayelekile kwamanyikwe. Kokuhlukahluka kwe-autoimmune kokulimala kwezitho, izinhlungu azikona, azifihli, azihambisani namaphutha ekudleni. Isifo sezinhlungu siqala engxenyeni yeziguli kuphela. Olunye uphawu olubalulekile lwe-autoimmune pancreatitis yi-jaundice evimbayo, eyenzeka ngokwesilinganiso ku-60-80% yeziguli futhi ibonakaliswa ngokuqina kwesikhumba kanye ne-sclera, ukulunywa kwesikhumba, kanye nokuqanjwa kwamanyala.
I-Autoimmune pancreatic pathology imvamisa ihambisana nokuphazamiseka kwento edyspeptic: isicanucanu, ukuguquka kwesimo sesitulo (profuse stool setool of a brownish color), ukuqhakaza. Ngokuqhubeka kwesifo, ukuntuleka kwemalabsorption kanye nezakhi zomzimba, okubonakala ngokuncipha kwesisindo somzimba sesiguli, ukuvuvukala okungenamaprotheni obuso namaphethelo aphansi. Ezimweni ezisekupheleni kwe-pancreatitis, kuba nesomiso esiqhubekayo, i-polyuria (izimpawu zokulimala kwe-glucose metabolism).
Umphumela walesi sifo kuncike ezingeni lokulimala kwezicubu, ubukhulu bezinkinga. Yize i-steroid therapy ivumela ukufeza ukuxolelwa ezigulini ezingaphezu kwe-90%, ukuvuvukala kwe-autoimmune pancreatitis kuyinto empofu, kwezinye iziguli kukhona ukwehla okungaphendukiyo emisebenzini ye-endocrine ne-exocrine yesitho. Ngenxa yokusebenza okungafanelekile kwe-etiopathogenetic, izindlela ezithile zokuvimbela azikakhiwa. Ukuvimbela izinkinga, kubalulekile ukuthola nokwelapha izifo ze-autoimmune zendlela yokugaya ukudla ngesikhathi esifanele.